Soomaaliya oo kalluunka ku baddalaneysa qaadka Itoobiya | KEYDMEDIA ONLINE
Soomaaliya oo kalluunka ku baddalaneysa qaadka Itoobiya
Dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya, ayaa ku heshiiyay in ay is dhaafsadaan Kalluunka iyo Qaadka, saxiix maanta ka dhacay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya, ayaa maanta kala saxiixday heshiis ay labada dal ku kala badalanayaan mid ka mid ah kheyraadka ugu fiican ee Soomaaliya leedahay (Kalluunka) iyo Sunta Itoobiya (Qaadka).
Garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde, ayaa maanta lagu kala saxiixday heshiiska oo ay goobjoog ka ahaayeen Wasiirka Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda, Cabdullaahi Bidhaan Warsame, iyo Wasiirka Gadiidka Dhulka iyo Cirka, Duraan Axmed Faarax, Safiirka Itoobiya iyo ganacsatada soo diyaarisay heshiiska.
Arrintaan oo in muddo ah soo jiitameysay, sababna u noqotay, xil isugu badalkii Wasiir Duraan iyo Wasiirkii hore Gadiidka Dhulka iyo Cirka, Oomaar, ayaa ugu danbeyn maanta hirgashay, waxaana dhaqan galka arrinkaan gadaal uga taagnaa Saddex nin oo uu jiro nin la dhashay Farmaajo, oo suuqa qaadku u xirnaa in muddo ah, sida uu sheegay Shaafici Yuusuf Cumar, oo lahaa figradda in Itoobiya loo dhoofinayo Kalluunka Soomaaliya.
Diyaarado keenay qaad ku jira jawaanno wasaq miiran ah ayaa la saaray kartoomo sajalan oo mallaay ah. In kalluunka la dhoofiyo waa il-ganacsi oo lama huraan, iyadoo laga faa’iideysanayo dalalka aan badaha lahayn, hayeeshee dad badan oo Soomaaliyeed ayaa heshiiskaan u arka in Sun lagu badashay Sixin.
Keydmedia Online, waxa ay todobaadkaan soo bandhigeysaa warbixin la xariirta qaadka Itoobiya, sida uu ku yimaado dalka, yaa keena? Magaca shaqsiyaadka la soo dega, dhibaatada ay kala kulmaan ganacsatada yaryar ee qaadka sii qeybiya, iyo xog walba oo la xariirta suuqa qaadka Itoobiya.